Gudiga Amniga Qaranka oo shir aan caadi aheyn xalay yeeshay maxaa ka soo baxey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudiga Amniga Qaranka oo shir aan caadi aheyn xalay yeeshay maxaa ka soo baxey
23rd October 2014 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Guddiga Amaniga Qaranka Soomaaliya oo ay wehliyaan hay’ado la sheegay iney amaanka ka caawiyaan dowladda federaalka ah ayaa kulan ay ku yeesheen kazoo saaray go’aan lagu baarayo xaafadaha Muqdisho oo dhan.
Kulankan san caadi aheyn oo uu shir guddoominayay R/wasaare ku xigeenka ahna wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed ayna goobjoog ka ahaayeen Taliyaha Hayadda Nabadsugidda Qaranka C/raxmaan Tuuryare iyo Saraakiisha sarsare ee Boliska, Milatariga, Nabad-sugidda, Amisom iyo Saraakiil Mataleyay Hayadaha Dhinaca Amaanka Ka Caawiya Dowladda Soomaaliya, ayaa laga soo saaray go’aanno lagu dardar galinayo howlgallada amni sugidda ah ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo goobalada kale ee laga saaray Al-Shabab.
Go’aannada shirka ka soo baxay waxaa kamid ah, In ciidamada amaanka ay si wada jir ah guriguri u baaraan Xaafadaha Magaalada Muqdisho, garaashyada, iyo bartilmaameedyo kale oo lagu tuhmayo in lagu abaabulo falal dambiyeedyo mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka, Maxamed Yuusuf Maxamuud oo shirka ka dib la hadlay RM ayaa sheegay in howlgalkan uu waxbadan kaga badalnaan doono howlagaladii Hore ay u wadday dowladda isagoo carabka ku adkeyay in dowladdu ay la wareegi doonto gurigii ama geerashkii lagu qabto ama lagu fashiliyo wax ammaanka dalka lid ku ah.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray in wax aan la aqbali karin ay tahay masuuliyad darida ka dhalan karta gawaarida raaxada ee ay leeyihiin dadka bartilmaameedka u ah Al-shabab ee lagu xiro walxaha qarxa.
Maxamed Yuusuf ayaa tilmaamay dadka leh gaadiidka lagu xiro walxaha qarxa wax laga weydiin doono in su’aalo la xiriira dayaacaad amni ee ay naftooda ku sameeyeen, isagoo xusay in dadkaas looga baahan yahay in ay xil iska saaraan goobaha ay gawaaridooda dhigayaan.
Ugu dambeentii, waxaa dadweynaha Soomaaliyeed laga codsaday iney garab istaagaan howlgalka cusub ee lagu baarayo xaafadaha magaalada Muqdisho.
Uber promo code for London, Manchester and Leeds: £10 discount
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka degay degmada Ceebuur